ထောက်ပံ့ရေး Mifare 1k S50 Chip ကောက်ပဲသီးနှံ, FM11RF08 Chip န့်ကို, Mifare IC S50 Chip Wafer, FM11RF08 Chip Grain, Mifare 1k S50 Chip Particles, FM11RF08 Chip Particles, FUDAN M1 Chip Wafer, MF1 S50 Chip Wafer
 » Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ထောက်ပံ့ရေး Mifare 1k S50 Chip ကောက်ပဲသီးနှံ, FM11RF08 Chip န့်ကို
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း FM11RF08 Chip Grain, FM11RF08 Chip Particles, FM11RF08 Chip န့်ကို, FUDAN M1 Chip Wafer, MF1 S50 Chip Wafer, Mifare 1k S50 Chip Particles, Mifare IC S50 Chip Wafer, ထောက်ပံ့ရေး Mifare 1k S50 Chip ကောက်ပဲသီးနှံ
FM11RF08 chip fully compatible with Mifare 1k S50 chip, the same performance, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်.
စံနှင့်အညီ: ISO ကို 14443A
rate ဆက်သွယ်ရေး: 106KBoud
အလုပ်လုပ် mode ကို: မလှုပ်မရှားနေသော
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 1KB, 8Kbit, 16 partitions ကို, တစ်ဦးချင်းစီက partition နှစ်ခု password ကို (1KB = 8Kbit)
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 2.5~ 10cm
Read နှင့်အချိန်ကိုရေး: 1~ 2ms
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 55 ℃ (-4℉ ~ + 131 ℉)
Eraser ဘဝ: >100000 ကြိမ်
ဒေတာကိုသိုလှောင်မှု: >10 နှစ်ပေါင်း
package စတိုင်: န့်ကို / Chip ကောက်ပဲသီးနှံ
Mifare IC S50 chip ( referred to as M1),anon- contact smart card chip in the vanguard, the operating frequency of 13.56MHz, and have the ability to read and write. Is the industry's first one can put ISO contactless smart card chip,with ultra-small coil also provides the ability to mass production. လက်ရှိအချိန်မှာ, the use of global Mifare IC S50 chip over two hundred million, withacontactless smart card market share of more than 85%. IC S50 hasahigh stability andawide range of applications foravariety of manufacturing special tags and smart cards, is the access control card, identification tag, business card, pre-paid water meters, ဘတ်စ်ကားကဒ်, highway fees, ယာဉ်ရပ်နားအများကြီး, residential area management, transportation cards, park tickets, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်အခြားဦးစားပေး RFID ထုတ်ကုန်.
I am interested in your product Supply Mifare 1k S50 Chip Grain, FM11RF08 Chip န့်ကို
prev: ထောက်ပံ့ရေး TK4001 Chip န့်ကို, TK4001 Chip COB
နောက်တစ်ခု: မော်တော်ယာဉ် IC Card ကို Holder, မော်တော်ယာဉ် IC Card ကို Fixed Holder, စမတ်ကဒ် Holder
4 စုတ်ယူခြင်းဖလားမော်တော်ယာဉ် IC Card ကို Holder,4စုတ်ယူခြင်းဖလား ID ကိုကတ် Fixed Holder
SMD ထုပ်ပိုး RFID Tag ကို Chip, SMD ထုပ်ပိုးလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Tag ကို Chip
ထောက်ပံ့ရေး UID Chip, ထပ်တလဲလဲမှာ Data UID Chip ရေးရန်, ထပ်တလဲလဲ UID Serial Number Chip ရေးရန်, ၏ UID Chip Modify နိုင်သလား 00 ဧရိယာ
NFC ကို / RFID Shield အချက်ပြကတ် Holder, လုံခြုံရေးကဒ် Holder Blocking RFID